स्वास्थ्य /जिबनशैली – Gorkhali Dainik
यो पोस्ट लाई सक्दो शेयर गरी भाग्य न्यौपाने सामु पुर्याई दिनु होला। तपाई हाम्रो चेली निजगढ नगरपालिका वडा नंम्वर 12 स्थित कोलगाउ निवासी सुमीना मोक्तान भर्खरै 19 बर्ष पुगेकी बहिनी को दुई ओटै मृगौला फेल भएको छ। आर्थिक स्थीति कमजोर भएको हुँदा अहिलेसम्म रोग को सिकार भई बस्नु परिरहेको अबस्था छ। आउनुहोस् तपाईं हामी सबै नेपाली मिलेर सुमिना मोक्तान लाई बचाउन सक्दो सहयोग गरौ, दशा बजा बजाएर आउँदैन यस्तो समस्या हामी लाई पनी पर्न सक्छ त्यसैले बहिनी लाई आफ्नै चेली सम्झी आफ्नै छोरी सम्झेर सहयोग गरौं, भोलि उसले पनि हामी लाई सहयोग गर्न सक्छ थप जानकारी को लागि बिरामी को बाबाको नम्बर:9826289270 वडा अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोले सम्पर्क नम्बर :9811185102 अन्तिम भन्नु पर्दा यो पोस्ट लाई सक्दो शेयर गरी भाग्य न्यौपाने सामु पुर्याई दिनु होलार म सँग पनि फेसबुक णा जोडिनु होला।
प्रेसर कुकरमा फसेको बालिकाको टाउको डाक्टरले पनि नि’काल्न सकेनन्….!
एजेन्सी। भारत गुजरात स्थित भावनगरमा एक बालिका घरमा खेल्दै थिइन्। घरमा भएको प्रेसर कुकरसँग खेल्दा-खेल्दै यस्तो भयो की उनले आफ्नो टाउको कुकरमा घुसाइन। घरमा उनका परिवारजनले बालिकाको टाउको कुकरबाट निकाल्न अनेक प्रयास गरे। उनीहरु लगाएका अनेक जुक्ति केहिले पनि कम गरेनन्। जसपश्चात उनीहरु बालिकालाई अस्पताल लैजान बाध्य भए। त्यहाँ डाक्टरहरुले पनि कुकरबाट बालिकाको टाउको निकाले प्रयास गरे। तर, उनीहरु पनि सफल हुन सकेनन्। बालिकाको टाउको कुकरबाट निकाल्न अर्थोपेडिकदेखि बाल चिकित्सा विभागका डाक्टरहरु सबैले आफ्नो-आफ्नो तरिका अपनाए, सफलता भने कसैले पनि पाउन सकेनन्। आफूहरुले नसक्ने देखेपछि उनीहरुले भाँडा पसलको मान्छेलाई बोलाएर कुकर काट्न लगाए। सावधानीपूर्वक कुकर काटेपश्चात मात्रै बालिकाको टाउको निकालियो। बताइएअनुसार घटना शुक्रबार को हो। बालिकाले टाउको कुकरमा फसाएपछि आफू तथा डाक्टरहरुले गरेका सबै प
मान्छे बाँच्न र आफ्नो जिन्दगी चलाउन कुनै न कुनै काम गर्नु पर्छ । कसैले व्यवसाय गर्छन् भने कसैले जागिर गर्ने गर्छन् । दुनियाँमा दैनिक गुजारा चलाउन कुनै न कुनै कामसँग जोडिएका हुन्छन् । मानिसहरुले थरी थरीका काम गरेको देखेका र सुनेका छौ । तर भैसी चराउनेलाई धेरै तलब दिएको भने कमै सुनेका छौ । वास्तवमा नोएडा र ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस स्थित झट्टा गाउँमा किसानले खास कामको लागि मानिसहरुलाई जागिरमा राखेका छन् । काम गरेको बदलामा राम्रो तलव दिएका छन् । यी मध्ये भैसी चराउने युवकको नाम झकस कुमार हो । र उनी बिहारका हुन् । झकसले भैंसी चराउने कामबाट २५ हजार रुपैयाँ लिने गर्छन् । झकससँग हाल ५० वटा भैसी छन् । झकस मात्र त्यो पेसामा लागेका होइनन्, उनी जस्तै अन्य व्यक्तिहरु पनि त्यो पेशामा आबद्ध छन् । हाल भैसी चराउने युवक घाँस काट्नलाई आएका थिए । त्यहाँका मानिसहरुलाई आफ्नो भैंसी चराउने र घास काट्ने फुर्स
बैंकमा पैसा निकाल्न जाँदै हुनुहुन्छ? सावधान, १ मिनेट समय दिएर यो अवस्य पढ्नुस……… !
काठमाडौँ – दशै, तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकै आइपुगेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्ने र झिक्नेसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भीड बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ नोट चलाउने रहर त सबैलाई हुन्छ नै तर यसप्रति विशेष चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । खिचापोखरीस्थित सनराइज बैङ्कबाट झिकेको एक लाख रुपियाँको बिटोभित्र एउटा नक्कली हजारको नोट भेटिएपछि, अनावश्यक तनाव बेहोरेका न्युुरोडका एक ‘क्यारिङ’ व्यवसायी बैङ्कका कर्मचारीको विश्वासमा पर्दा समस्या आएको बताउँछन् ।बिटोमा बैङ्कको स्टिकर र छाप हानिएकाले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था थिएनन् । कार्यालयमा भएको थप रकम जम्मा पारी नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा जम्मा गरेको दुई दिनपछि बैङ्कका कर्मचारीले फोन गरी ‘नक्कली नोट मिसाउने’ भन्दै हप्काएका थिए। बैङ्कका कर्मचारीले नै सक्कली र नक्कली नोट नचिन्दा केही दिनअघि आफू यस्तो समस्यामा परेको गुनासो ती व्यापारीले गरेस्
रातीमा धेरै पसिना आउँछ…. ? जानी राखौँ तपाईको स्वास्थ्यको लागि यो धेरै ख तरनाक सा वित हुनसक्छ ….!
गर्मी मौसममा पसिना आउनु सामान्य कुरा हो तर केहि मानिस यस्ता पनि हुन्छन जसलाई आवश्यकता भन्दा बढी पसिना आउँछ । यदि तपाईलाई पनि यस्तै समस्या छ भने यसलाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन । चिकित्सकका अनुसार रातीमा अधिक पसिना आउनु र तनाव महसूस गर्नु खतराको संकेत हो । यस्तो समस्या भएमा तुरुन्तै चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्दछ । अधिक पसिना आउनु यस्ता रोगहरूको संकेत हुन्छन् । आइडियोपैथिक हाइपरहाइड्रोसिस** धेरै अवस्थामा राती पसिना आउने विशेष कुनै कारण थाहा हुँदैन जसलाई आइडियोपैथिक हाइपरहाइड्रोसिस को नामले चिनिन्छ । यसमा बिनाकारण शरीरबाट अधिक पसिना आउन थाल्छ । यो रातीमा अत्यधिक पसिना आउनुको कारण हुनसक्छ । टीबी** ट्यूबरक्लोसिस अर्थात् क्षयरोगले पीडित मानिसलाई रातीमा पसिना आउने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको तुरुन्त सल्लाह लिनुपर्दछ । इनफेक्शन** केही किसिमको ब्याक्टेरियाको इनफेक्शनको कारणले
काठमाडौं २५ फागुन / ग्यास्ट्राइटिस भएकाले एसिडिक खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन । जसमा कागती, सुन्तला, निबुवा, भोगटे आदि फल पर्छन् । यस्तो समस्या भएकालाई टमाटरले पनि थप असर पु-याउँछ । टमाटरमा पनि एसिडिक हुने भएकाले ग्यास्ट्राइटिसले दिने पीडालाई बढोत्तरी गर्छ । कसै–कसैले यसको थोरै प्रयोगले त्यति असर नगर्ने भए पनि खाँदैनखानु उत्तम हुन्छ । दूध र दूधजन्य पदार्थ पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या भएकाले प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । दूधमा हुने प्रोटिनले पेटको भित्री भाग सुन्निने हुन्छ । यसका साथै यसले पेटमा एसिडको मात्रा बढाउँछ । तर, दही भने फाइदाजनक हुन्छ । यसमा पाइने प्रोबायोटिकले भने रोगीलाई राहत प्रदान गर्छ । यद्यपि, दहीको प्रयोग गरेर त्यसले राम्रो गरे मात्र नियमित सेवन गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा मदिरा सेवन गर्दा पनि ग्यास्ट्राइटिसको असर झन् बढेर जान्छ । तर, केही अध्ययनले भने दिनहुँ थोरै मात्राम
काठमाडौँ- कोरोना भाइरस संक्रमणको रोग अर्थात कोभिड-१९ का कारण वैशाख यता धेरै चाडपर्वहरू ओझेलमा परे । भक्तपुरको प्रख्यात बिस्केट जात्रा, ललितपुरको रातो मच्छेन्द्रनाथ र काठमाडौँको इन्द्रजात्रा लगायतका थुप्रै जात्राहरूमा विधि पुर्‍याउने काम मात्रै भयो । जनै पूर्णिमामा हिन्दू मन्दिरहरू बन्द रहे । तीज र कृष्ण जन्माष्टमी पनि घरमै मनाइए । इस्लाम धर्मवलम्बीको इदमा घरमै प्रार्थना भयो, मस्जिदहरू बन्द रहे ।अब नजिकै हिन्दुहरूको ठूलो चाड दशैँ आउँदैछ । दशैँपछि तिहार र अर्को ठूलो पर्व छठ आउँछ । यी चाड मनाउन राजधानी काठमाडौँमा अस्थायी बसोबास गरेको ठूलो जनसंख्या बहिरिन्छ । चाड सकिएपछि काठमाडौँ आउनेको घुइँचो हुन्छ । दशैँमा देशैभर आफ्ना पारिवारिक अग्रजहहरू भेट्न ठूलो जनसंख्याले यात्रा गर्छ । यस वर्ष भने कोभिडका कारणले मानिसहरूमा यात्रा र भेटघाटमा अन्योल छाएको छ । कसैलाई जे पर्ला पर्ला चाड त मनाइन्छ भ
हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष…. – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला….. ?
शारदा शर्मा – आज भन्दा ७ बर्ष अगाडि ! तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रुकुमको प्राङ्गणमा केटीहरुको भिडभाडको बिचमा देखिएको एउटा विचित्रको दृश्यले मेरो ध्यान तान्यो । दुबै हात जमिनमा टेकेर पुरै शरीर लतार्दै, घिर्सिदै हिड्ने मानिसको त्यो अवस्थाले मेरो मात्र हैन धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो । असह्य शा रिरीक पी डा बोकेर शरीरलाई ढुंगा र माटोमा लतार्ने भविष्यका सूनौला सपना बोकेर जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट आएकी थिईन,उनी अर्थात २६ बर्षीया शारदा शर्मा । करिब ४० किलोमिटर जंगल र भिरको बाटो खुट्टाका घुँडा र हातका पन्जाले थिचोल्दै जिल्ला विकास समिति रुकुममा आईपुगेकि थिईन उनी । त्यतिबेला जिविसमा महिलाहरूको लागि निःशुल्क खरीदार पदको टिउसन पढ्नेहरुको लागि प्रवेश परिक्षा हुदै थियो । त्यसैमा सहभागी हुन अशक्त शरिर घिसार्दै अत्यन्तै कष्टका साथ निकै टाढा रहेको पश्चिम खोलागाउँवाट मुसिकोट खंलगा पुगेकि रहेछिन शार
हाम्रो शरीर एउटा प्रक्रियामा चलेको हुन्छ। सूर्य उदाएपछि दिन शुरु भएजस्तै मानिसको शरीर पनि चल्न शुरु हुन्छ। सूर्य अस्ताएसँगै शरीरले पनि आरम खोज्छ। दिनभरी चलायमान भएको शरीर रातमा आराम गरेर भोलिपल्ट फेरि सक्रिय हुन्छ, यसको लागि मानिस निदाउन जरुरी छ। भनिन्छ, एक स्वस्थ मानिसलाई ६ देखि ८ घण्टा निदाउनु पर्छ। मानिसको निन्द्रालाई मोबाइलसँग दाजेर भन्ने हो भने, निदाउनु भनेको रिचार्ज गर्नु हो । शरीरको थकान हटाउन चाहिने आराम पर्याप्त निन्द्राले मात्र पुर्याउँछ । त्यसलै मानिस निदाउन आवश्यक हुन्छ । एक स्वस्थ मानिसलाई ६ देखि ८ घण्टा निदाउनु पर्दछ । आजकल मोबाइल, टेलिभिजन लगायतका सामाग्रीको प्रयोग र तनावका कारण अबेर रातिसम्म मानिसहरु निदाउदैनन् । यदि अबेर रातीसम्म निन्द्रा नलागेमा यी उपाय अपनाउनु पर्दछ । . सम्भव र अनुकुल महशुस भए आखाँ छोपेर सुत्नुहोस् । . मोबाइल, टेलिभिजन वा आवाज आउने यन्त्र अफ गर